Indlela yokwenza iKhadi leSazisi kwizinto ezintathu ezilula? - Make.id
Indlela yokwenza iKhadi leSazisi kwizinto ezintathu ezilula?
yi-ID ID Septemba 18, 2018
Indlela yokwenza i-ID yayinomngeni kwiminyaka embalwa edlulileyo. Nangona kunjalo, izinto ezininzi zitshintshile ukususela ngoko. Namhlanje ngenye yezinto ezilula kakhulu ezinokuthi zenziwe kwi-intanethi ngabani na ngemizuzu. Isikhokelo esilandelayo sichaza inkqubo yokwenza i-ID yekhadi ngaphandle kokuphula i-sweat okanye ibhanki ekupheleni kwayo.
Ngaphambi kokuba uqale ukwenza ikhadi lakho le-ID
Okokuqala, kufuneka wenze ingqondo yakho malunga neembonakalo ezipheleleyo zekhadi le-ID. Phantse nayiphi na intanethi umenzi wekhadi lokuchonga unoluhlu lweetemplates ozikhethayo. Kungcono ukuba nolunye uhlobo lwekhadi le-ID oyifunayo, imibala ekhethiweyo kunye noyilo. Ngaloo ndlela awuyi kubambelela ngokukhawuleza kwiimodeli ezahlukeneyo ngelixa uzama ukufumanisa ukuba ngubani onokukuthandela.
Enye into yokwenza ngaphambi kokuqala inkqubo ifumana umfanekiso ofanelekileyo. Umfanekiso kufuneka ubonise ubuso bakho okanye ubuso obani na owenza ikhadi. Fumana enye kwaye uyibeke kwifolda ukuze uyisebenzise kamva.
Isinyathelo 1 - Fumana umenzi wekhadi lokuzibonakalisa
Ukufumana umenzi wekhadi elichongiweyo eliqala ukuqala ukuqala ngokukhusela i-scammers kunye nabakhohlisi. Ezi nkonzo zikwabelana ngamanye amashishini afanayo njengoko afakwa kwi-hosting yamahhala (yokuqala ingcebiso yokusebenza), ukubuyekezwa kwabo ngabasebenzisi kubonakala ngathi kubhalwe kumntu omnye, bakhetha iintlawulo kwi-cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum, njl.) Kunye nomthengi wabo inkonzo ayinakho. Ngelo xesha, umenzi wekhadi lokuchonga othembekileyo Inkonzo ineziganeko ezichaseneyo.
Inyathelo 2 - Qala isicelo sakho
Inkqubo yesicelo idalwe engqondweni ukwenzela ukuba nabani na ulwazi olusisiseko lwe-intanethi kunye nekhompyuter bangakwenza. Konke okufuneka ukwenze ukufaka ulwazi lwakho, okanye ulwazi owenza ngalo ikhadi le-ID, ulayishe isithunzi apho ubuso buboniswa ngokucacileyo kwaye buyifake. Okulandelayo kuza ukushicilela nokuthumela. Oku kwenziwa ngabantu abasebenza kwinkampani.
Inyathelo 3 -Ubukhulu bhekise ukungena kwakho
Impazamo eqhelekileyo abantu bayenzayo kukuba bayaphonsa amagama abo okanye ezinye iinkcukacha ngaphandle kokuqonda. Yonke into ekukhawulezeni kwangoko ukwenza izinto zikhawuleze. Ngenxa yoko, bafumana amakhadi e-ID kunye neziqinisekiso ezingafanelekanga, oku kuthetha ukuba kufuneka ikhadi elitsha, kwaye abantu baqala ukukhomba iminwe ephosakeleyo.
Ukuze ufeze oko, cwangcisa kabini idatha yakho ngaphambi kokuba ucinezele ukuthumela.
Yintoni ongayilindela kumenzi wekhadi lokuchonga inthanethi?
Ukusebenzisa iinkonzo zomenzi wamakhadi ochanekileyo uthetha ukuba unelungelo lezinto ezimbalwa:
Ikhadi lesazisi liya kuhanjiswa kwidilesi enikezelwe nguwe.
Ixesha lokuhambisa lingahluka kwaye ngokuxhomekeke kwiinkonzo zengqesho zendawo.
Idatha yakho ikhuselwe kwaye iqinisekisiwe ukuba akukho nto iya kuthengiswa kwiqela lesithathu.
Akukho mali efihlakeleyo okanye nayiphi na into enjalo.
Umboneleli uqinisekisa ikhadi eliphezulu lomgangatho (holographic kumacandelo omabini kunye nebhayisikiti kwikhadi ngalinye).
Yonke inkqubo yokwenza i-ID yekhadi kwi-intanethi ifanele ukuba ibe lula kwaye isebenze. Yingakho i-maker maker maker ikhula ngelixa kunye namakhulu amawaka abasebenzisi emhlabeni wonke imihla. Ngaphezulu kwayo, amanani abo avumelekileyo kubantu abaninzi. Kukho konke, abantu bafumana amakhadi e-ID esemgangathweni yamanani afikelelekayo. Funda Okuninzi